Fantaro amin'ny loharanom-baovao mahazatra indrindra sy ny tranonkala fandingànana maimaim-poana izay hamonjena ny vanim-potoana - famerenana ny fandaharam-potoana
Ireo fitaovana fandinganana tranonkala dia natao hanangona fanazavana manan-danja amin'ny tranokala. Manatontosa ny asany ao Java, C ++, Python, Ruby, ary fiteny hafa programming. Ny sasany amin'ireo tranonkala moka sy ny tolotra fanokanana afa-po dia ampy tsara mba hahatonga anao ho marina sy tsy misy diso ny angon-drakitra anatin'ny segondra. Ny sasany amin'ireo fampiharana tena mahagaga dia noresahana etsy ambany:
Io dia iray amin'ireo tolotra mahasoa indrindra mahasoa sy mahavariana izay hamonjy ny fotoantsika. Import. Izany dia fampiharana feno Desktop, maimaim-poana izay manampy amin'ny famoahana ireo angona ilaina avy amin'ny tranonkala sy bilaogy tsy voafetra. Ity serivisy ity dia mitondra ny tranonkalantsika ho toy ny loharanom-kaonty ahafahana mamorona API avy. Noho izany dia mitahiry ny fotoanantsika ary mety tsara ho an'ny orinasa sy orinasa lehibe. Import. Tsy manara-maso ireo pejy efa nataonao teo aloha. Ny tsy fahampian'ny Import. Izany dia tsy afaka mivezivezy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa. Midika izany fa tsy maintsy ampidirinao ireo URL tianao handraisana ny data amin'ny tanana.
Fanompoam-pivavahana vaovao nohavaozina. Uipath dia manasongadina ny angon-drakitra sy ny votoaty momba ny harena ankibon'ny tany ho an'ireo mpampiasa azy. Afaka manao asa marobe amin'ny fotoana iray izy ary mety amin'ny roa sy ny coders. Plus, ity programa ity dia manana pejy tsara tarehy pejy ary afaka manaparitaka ny rakitra PDF anao, manome anao ny vokatra tianao ary mamonjy ny fotoanao amin'ny fitrandrahana rakitra. Ilainao fotsiny ny manokatra ilay mpampiasa, lazao ny URL tianao hampihenana ny angon-drakitra ary i Uipath dia hanomboka hanao ny asany. Ity fampiharana ity dia mamaky mora foana amin'ny alalan'ny flash ary mahalasa anao ireo rakitra azo vakina sy azo henoina ao anatin'ny minitra vitsy. Azonao atao ny mahazo CSV sy Excel dokam-barotra. Ny fandaharam-pamokarana voalohany dia tsy mety ho fanombohana i Uipath satria bitika kely izany.
Kimono Labs no safidy voalohany ataon'ireo mpandahateny, mpanao gazety, mpikirakira aterineto, webmaster, orinasa, ary olona tsy teknika. Izy io dia manatanteraka asa fanodinana fako sy votoaty momba ny harena ankibon'ny tany amin'ny fotoana iray ihany. Ity fitaovana ity dia ampiasaina amin'ny endri-dàlana mivantana miaina, izay ahafahanao mijery na manara-maso ny kalitaon'ny angon-drakitra rehefa hosavaina. Ary koa, ny Kimono Labs dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny navigateur rehetra sy ny rafitra miasa. Tsy manolotra tranokala fitadiavana pejy izy io, ary tsy maintsy mandany fotoana vitsivitsy hampiofanana ny Kimono Labs alohan'ny hamoahana ireo angona ao amin'ny format nofantenana Source .